प्रमोसन भएपछि खुसी भएका गुरुङ्ग दशैँमा छुट्टीमा आउँछु भनेर डिउटीमा निस्केका थिए ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/प्रमोसन भएपछि खुसी भएका गुरुङ्ग दशैँमा छुट्टीमा आउँछु भनेर डिउटीमा निस्केका थिए !
काठमाडौं । गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएका नेपालीहरुले भारतको सिमा रक्षा गर्दा अहिले सम्म थुप्रैको ज्या’न ग’एको छ । भारतले सिमा वि’वाद भएका स्थानमा गोर्खा सैनिकलाई पठाउने गरेको छ । सिमानामा भारतको भूमी रक्षा गर्दा ज्या’न गु’माएका नेपालीहरुमा सम्बुर गुरूङको पनि नाम थपिएको छ । उनी गुल्मीका हुनुहुन्छ ।
भारतको छिमेकी मुलुक कसैसंग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । सिमानाका विषयमा भारतको सबै छिमेकी मुलुकसंग राम्रो छैन । केही दिन अघि चीनसंगको घटनामा भारतीय सेनाका कर्णेल सहित २० जनाको निधन भएको थियो । नेपालसंग पनि पछिल्लो समय सिमानाकै कारणले सम्बन्ध विग्रिएको छ ।
वीर अस्पतालका ३० स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा अहिले सम्मकै धेरै संक्रमित फेला, कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४० हजार नाघ्यो
छ्यो ताल फुट्ने खतरा टर्यो, घट्यो एक मिटर सतह
मकवानपुरमा चट्याङ लागेर दुई जनाको मृत्यु, एक जना घाइते
वालिङ पहिरोमा एकै परिवारका ९ जनाको मृत्यु [अपडेट]